AHOANA NO HAMPITOMBOANA RAM AMIN'NY ORDINATERA - WINDOWS - 2019
Mampitombo ny RAM ao amin'ny ordinatera
Ao amin'ny tambajotra sosialy VKontakte, toy ny amin'ny tranonkala hafa mitovy amin'izany ihany, misy andiana asa manokana izay ahafahanao mamantatra ny antontan'isan'ny pejy. Amin'izany fotoana izany koa, ny mpisera tsirairay dia nomena fahafahana hijery ny fomba isehoany ny statistika manokana, izany hoe ny mombamomba azy manokana, ary ny fiarahamonina iray manontolo.
Ny fahasarotana amin'ny famerenana ny antontanisa statistika avy amin'ny pejin'ny VK dia voafaritra manokana amin'ny toerana izay anaovana ny fanadihadiana. Noho izany, ny kaonty manokana momba ny tena olona iray dia mora kokoa ny mandinika noho ny fepetra sasantsasany ateraky ny fitantanana an'ity tambajotra sosialy ity. Na izany aza, na dia amin'ity lafiny ity aza dia misy antony marobe izay mendrika kokoa ny sainy.
Jereo ny antontan'isa avy amin'ny VKontakte
Voalohany indrindra, ny fahitana ny antontan'isa momba ny mombamomba ny mombamomba ny tsirairay na ny fiarahamonina iray manontolo dia tsy mitovy amin'ny fandalinana ny lisitry ny vahiny, izay noresahintsika teo aloha tao amin'ny lahatsoratra mifanaraka amin'izany, dia tokony mijery manokana. Eo am-piandohana, ity dingana ity, na aiza na aiza toerana tianao haleha amin'ny tambajotra sosialy VK, dia ahafahanao mahita ny fandaharam-potoan'ny fitsidihana, ny fomba fijery ary ny karazana hetsika samihafa.
Ny statistika VKontakte androany dia azo jerena amin'ny toerana roa:
ao amin'ny pejinao.
Na dia eo aza ny fampahalalana ilainao manokana, dia handinika bebe kokoa ny lafiny rehetra momba ny fianarana ny antontan'isa.
Jereo koa: Ahoana ny fijerena antontan'isa ao amin'ny Instagram
Raha mikasika ny vondron'ny VKontakte, ny fampahalalana momba ny antontan'isa dia iray amin'ny anjara asa manan-danja indrindra, satria ity fonctionna ity dia afaka manazava ny lafiny maro amin'ny fanatrehana. Ohatra, manana vondrona ho an'ireo olona manana fepetra sasantsasany ianao, manamboatra izany ary mampiasa statistika mba hanamarinana ny fanatrehana sy ny faharetan'ny famandrihana.
Ny antontam-panatrehan'ny olona rehetra, na mifanohitra amin'ny mombamomba azy, dia mety tsy ho an'ny fitantanana ny vondrona, fa amin'ny mpikambana hafa ao amin'ny fiarahamonina ihany koa. Na izany aza, azo atao izany raha toa ka napetraka ao anatin'ny sehatry ny fiarahamonina ny fanalahidin'ny tsiambaratelony momba izany.
Mariho fa ny hahatonga anao ho vondrom-piarahamonina, dia sarotra kokoa ny mifehy ny antontan'isa. Ankoatra izany, arakaraka ny habetsahan'ny vondrona, ny fampahalalam-baovao dia mety tsy miovaova amin'ny olona 1-2, saingy misy fiantraikany eo amin'ny an-jatony sy ny mpampiasa an'arivony atsy ho atsy.
Sokafy ny tranokala VK ary midira ao amin'ny sehatra ao amin'ny sakafo eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery. "Groups".
Eo am-pototry ny pejy voalohany misokatra, dia fidio ilay tab "Management" ary sokafy ny pejin-tranonkalan'ny vondrona misy anao.
Raha liana amin'ny antontan'isan'ny vondrom-piarahamonina vahiny ianao dia mila manokatra izany ary manaraka ny torolàlana hafa rehetra. Na izany aza, tadidio fa ny fitantanana, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia tsy manome fahafahana miditra amin'ny fampahalalam-baovao toy izany.
Soraty eo ambanin'ny avatar ny lakile "… " ary tsindrio eo.
Anisan'ireo zavatra voalaza ireo, midira ao amin'ny fizarana. "Statistical Community".
Ao amin'ny pejy misokatra, dia aseho amin'ny karazana marobe samihafa marobe izay misy eo amin'ny iray amin'ireo raki-peo manokana efatra. Ireto misy ireto manaraka ireto:
Ao amin'ny tabilao voalohany dia andian-tsoratra izay ahafahanao manara-maso mora foana ny fanatrehan'ny olona. Eto no ahafahanao mandalina ny fitomboan'ny fitomboan'ny fahalalanao, ary koa ny fampitoviana amin'ny mpihaino mahaliana indrindra amin'ny taonany, firaisana ara-nofo na ara-jeolojia.
Ao amin'ny takelaka voalohany ihany koa dia ny fahafahana mampiasa na mandràra ny fidirana ankapobeny amin'ny antontan'isa.
Tabera faharoa "Fandrakofan'ny" Izy dia tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana ny mombamomba ny habetsahan'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina manoloana ny famoahana ny famoahana amin'ny vaovao. Ny tahirin-kevitra dia zaraina ho an'ireo mpampiasa ao amin'ny tarika, miorina amin'ny fampisehoana isan'andro.
Ity tanjona manaraka ity dia natao hanombanana ilay asa amin'ny resaka resadresaka. Izany hoe, eto dia azonao atao ny manara-maso ny asa ataon'ny mpandray anjara ao amin'ny vondrona misy anao rehefa manoratra fanamarihana na mamorona fifanakalozan-kevitra.
Ilaina ny mitadidy fa ny asa rehetra avy amin'ny fitantanana ihany koa dia raisina an-tsoratra.
Ny tabilao farany dia tondro ny fanombanana ireo olona mampiasa ny asa fanehoan-kevitra avy amin'ny fiarahamonina.
Raha toa ka esorinao ny fahafahana manoratra hafatra momba ny fitantanana, dia tsy ho vita ny fandaharam-potoana.
Raha ny sary tsirairay omena, dia omena fahafahana fanampiny hanondrana antontan'isa. Ampiasao ireto ny bokotra mety "Hamindrana antontan'isa"eo an-tampon'ny pejy "Statistics".
Ankoatra ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, dia ilaina ny mandinika fa ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina miaraka amin'ny antontan'isa misokatra dia misy vaovao hafa tsy misy mivantana amin'ny tompon'andraikitra. Noho izany dia azo heverina ho vita avokoa ireo fepetra rehetra azo atao ao amin'ny antontan'isan'ny vondrom-bahoaka.
Pejin'ny pejy manokana
Ny singa manan-danja indrindra manavaka io karazana antontan'isa io dia ny hoe afa-tsy io mpiserasera io, izay manana olona 100 na mihoatra, afaka mahazo izany vaovao izany. Noho izany, raha misy olona maromaro efa tsy voafaritra amin'ny fanavaozana ny VKontakte, ny mombamomba anao manokana dia tsy mamakafaka ny fizotry ny analytics.
Ao amin'ny fotony, ny fampahalalana pejy an'ny pejin'ny tena dia tena manana ny toetrany tena mitovy amin'ny antontan'isa momba ny vondrom-piarahamonina voatanisa teo aloha.
Mandritra ny VK.com, ampiasao ny loha-hevitra lehibe hikirakirana ny fizarana. "Ny pejy".
Eo ambanin'ilay sary lehibe misy ny mombamomba anao, dia jereo ny sary miainga eo ankavanan'ny bokotra. "Edit".
Ao amin'ny pejy misokatra, afaka mijery tabilao telo samihafa ao amin'ny fiarahamonina ianao.
Ny fizarana tsirairay dia mitovy ny voalaza tetsy aloha tao amin'ny fizarana momba ny antontan'isan'ny vondrom-piarahamonina. Ny fahasamihafana mazava indrindra dia ny tsy fahampian'ny fandefasana ny fandalinana hafatra sy hafatra nalefa.
Mariho fa ireo tarehimarika izay azonao atolotra ao amin'ny vondron'ny VKontakte sy ny pejy manokana dia mety samy hafa tanteraka amin'ny samy hafa. Mifandray mivantana amin'ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina amin'ny alalan'ny fanaovana dokam-barotra isan-karazany sy ny fametahana.
Ny fampahalalana rehetra ilainao amin'ny varavarankely "Statistics" Ao amin'ny pejin'ny tena manokana, azonao atao ihany koa ny mampakatra ao amin'ny rakitra misokatra ho an'ny fanodikodinana hafa.
Amin'izany, ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny antontan'isa amin'ny ankapobeny dia azo raisina ho vita. Raha misy olana, ireo loharanom-baovao ara-teknika avy amin'ny fitantanana VK ary ny fahafahana hanoratra fanehoan-kevitra ao amin'ny tranokalanay dia omena anao mandrakariva. Maniry anao ny tsara indrindra!